के रंगभेदी 'पपुलिष्ट' राजनीतिकै शिकार भएका हुन् त राजकुमार ह्यारी दम्पत्ती? किन बसाउँदैछन् क्यानडामा नयाँ घर ? - Vishwa News
25-Feb-2020 | १३ फाल्गुन २०७६, मंगलवार
राजकुमार ह्यारी एक विन्दास व्यक्ति थिए । हँसिलो स्वभावका उनी धेरैका लागि रोल मोडल नै बने । दरबारी रवाफ भन्दा आम जीवनमा रमाउँथे । कहिले बन्दुक बोकेर आफ्ना सैनिकहरुको हौसला बढाउन अफगानिस्थानको युद्ध मैदानमा पुग्थे त कहिले भूकम्पले क्षतविक्षत नेपालका विकट गाउँमा गएर श्रमदान गर्थे । दुई बर्ष अघि अमेरिकी अभिनेतृ मेघन मर्केलसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएसँगै ह्यारीको विन्दास जीवनले व्यवहारिकताको मोड लियो ।
हुनत मे १९ सन् २०१८ बेलायतमा उमंगको दिन थियो । सन् १९९७ मा आमा डायनाको मृत्यु हुँदा अवोध टुहुरा राजकुमारहरु विलियम र ह्यारीलाई देखेर भक्कानिएका बेलायती मनहरुले ह्यारीको विवाहका दिन दिल खोलेर खुसी मनाएका थिए । दाजु विलियम यस अघिनै जोडि बाँधेर पिता समेत भइ सकेको हुँदा बेलायतीहरु ब्यग्रताका साथ ह्यारीलाई बेहुलाको रुपमा हेर्न पर्खि रहेका थिए । जब त्यो क्षण आयो उनीहरुले सठकमै ओर्लिएर स्वागत गरे ।
आम बेलायतीका लागि त्यो एक उत्साहका दिन थियो भने स्वयं राजकुमार ह्यारी विन्दास जीवनबाट जिम्मेवारीमा बाँधिदै थिए । उनको पारिवारिक दायित्वको गाँठो दिन प्रतिदिन कसिलो हुन थाल्यो । गत मे मा ह्यारी र मेघन बाबु आमा बने । बाहिरबाट हेर्दा सबै ठिकठाकै थियो । तर, गत साता ह्यारी र मेघनका नाममा अचानक एउटा विज्ञप्ती आयो । जसमा लेखिएको थियो– ह्यारी दम्पती अब आर्थिक रुपमा स्वतन्त्र बन्ने र दरवारी जीवनशैली त्यागेर आम दैनिकीमा फर्किने ।
यो विज्ञप्तिले विश्वभर एक तरंगको अवस्था ल्यायो । किनभने बेलायती राजपरिवार विश्वभरका परिवारका लागि एक ‘आइडल’ नै हो । जहाँ रानी एलिजावेथको छत्रछाँयामा सबै खुसी छन् । आपसमा प्रेम छ । तर, ह्यारी र मेघनका लागि किन त्यो छहारी अपुग भयो ? विश्वभरबाट यो प्रश्न ओइरियो । सबैले आ–आफ्नै शैलीमा विश्लेषण समेत गर्न भ्याए । अन्ततः अनन्त प्रश्नको बर्षा भएपछि रानी आफैँले सोमबार एक विज्ञप्ती जारी गरेकी छिन् ।
जसमा उनले आफ्ना नाती र नातीनी बुहारीको स्वतन्त्र जीवन बिताउने निर्णयको कदर गर्दै उनीहरुलाई शुभकामना दिएकी छिन् । ‘हामी अवश्य चाहन्थ्यौँ की उनीहरु दरवारकै अंग रहिरहुन्, रानीले विज्ञप्तीमा भनेकी छिन्– तर हामी उनीहरुको निर्णयलाई कदर गर्न चाहन्छौँ र अब उनीहरु स्वतन्त्रता पूर्वक आफ्नो जीवन निर्वाह गर्दै मेरो परिवारको अभिन्न अंगको रुपमा रहनेछन् ।’ ह्यारी र मेघनले नयाँ घर बसाउने शिलशिलामा दरबारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग हुने र उनीहरु अन्तरिम कालमा आफुसँगै रहने समेत उनले प्रष्ट पारेकी छिन् ।
ह्यारी र मेघनले विज्ञप्ति मार्फत आफुहरुले बेलायत र उत्तर अमेरिकामा आधा आधा समय विताउन चाहेको बताएका थिए । त्यो सुन्ने वित्तिकै धेरैले मेघनको माइती न्यूयोर्कमा शाही दम्पतीले घर बसाउने खोजेको अड्कल काटेका थिए । तर, पछि उनीहरु अमेरिका नभइ क्यानडामा ‘सेटल’ हुन खोजेको प्रष्ट भएको छ ।
केही समय देखि ह्यारी र उनका दाजु विलियमको खटपट भएको समाचार पनि मिडियाहरुमा आएका थिए । तर, उनले दरबार छोड्नुका पछाडिको कारणनै त्यही हो भन्ने निक्र्यौल चाहिँ निस्किन सकेको छैन । बेलायती ट्याबलोइट मिडियाको रंगभेदी समाचारले ह्यारी दम्पतीलाई आजित बनाएको र अहिले बोरिस जोनसनको सरकारले रंगभेदलाई थप मलजल गरेका कारण उनीहरुले यो निर्णय लिएको एक खाले विश्लेषण भइ रहेको छ । यो विश्लेषण तुलनात्मक रुपमा सत्यको नजिक जस्तो पनि लाग्छ । किनभने उनीहरुले बेलायत छोडेर क्यानडामा घर बसाउने निर्णय गरेका छन् । अहिले पश्चिमा विश्वमा क्यानडा मात्र यस्तो देश रहेको छ जहाँ ‘लिबरल डेमोक्रेटिक’ सरकार छ ।
अमेरिकाको ट्रम्प सत्ता र बेलायतको जोन्सन सरकार दुबै दक्षिणपन्थी मार्गदर्शनमा चलेका छन्, जसको राजनीतिक गुह्यमा रंगभेदनै लुकेको हुन्छ । ह्यारी जन्मेको बेलायत र मेगन जन्मेको अमेरिका दुबैतिर नभइ बसोबासका लागि क्यानडा रोज्नुले उनीहरुले समाजको समन्यायीक सोचमाथि पनि बिचार पुर्याएको विश्लेषण गरिएको छ ।
ह्यारीले एक दुई पटक मुखै फोरेर बेलायतको ट्याबलोइट पत्रिकाले आफ्नी श्रीमतीप्रति गरेको खेदोले आफुहरुलाई हैरान बनाएको बताएका थिए । मेघन अश्लेत मूलकी हुन् । बिबिसीकै एक प्रस्तोताले ह्यारी र मेघनको सन्तानलाई चिम्पान्जीसँग तुलना गरेकी थिइन् । ब्रिटिस मिडिया मेघनप्रति यति पुर्वाग्रही थियो कि उनले जे गरे पनि खेदो मात्र खन्थ्यो । उनी ‘ब्रिटिस भोग’ नामक पत्रिकाको अतिथी सम्पादक बनिन् । बाँकी सारा उनको विरुद्ध खनिए । जबकी मेघनकी जेठानी केट मिडल्टनले हफिङ्टन पोष्टको त्यही जिम्मेवारी स्वीकार्दा सबैतिरबाट वाही वाही पाएकी थिइन् । साेमबार मात्र बजफिड मिडियाले ब्रिटिस मिडियाले मिडल्टन र मेघन माथि ब्रिटिस मिडियाको भेदभावपुर्ण रिपाेर्टिङका २० उदाहरण प्रकाशित गरेको थियो ।
यी सबै हर्कतबाट ह्यारी दम्पती प्रष्ट भइ सकेका थिए की समस्या मेघनको काम गराईमा होइन उनको जन्ममा छ कि उनी स्वेत रगतको हिस्सा भइनन् । कम्तिमा छिटो भन्दा छिटो ब्रेक्जिट फत्ते गरेर बाँकी अश्वेतहरुलाई थप निशाना पार्ने मिसनमा हिँडेको बोरिस जोन्सन सत्ताको बेलायतमा उनीहरुले कामना गरेको समता हासिल हुन सक्दैन, जहाँ व्यक्तिको रंग होइन विवेक हेरेर व्यवहार होस् । उनीहरुले दरबार छोड्न जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रष्ट संकेत पनि गरेका छन् – ‘छोरालाई अध्यात्म केन्द्रित वातावरणमा हुर्काउने चाहना अनुरुप’ भनेर । यो वाक्यले उनीहरुको औडाहा प्रष्ट पारेको छ । यो बुझ्न कठिन छैन की अध्यात्मलाई उनीहरुले समता र मानवताको रुपमा संकेत गरेका हुन् । उनीहरुले आफ्ना छोरालाई जन्मिने वित्तिकै शाही पदवी लिन समेत अश्विकार गरेर एक न एक दिन फरक संसारमा जाने लक्षण देखाइ सकेका थिए ।
(एजेन्सीहरुको सहयोगमा, तश्वीर एजेन्सी)
४२ बर्ष पछि बिद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा न्युयोर्कमा अन्धकार र हाहाकार